The Ab Presents Nepal » नायक जयक किशन बस्नेतले निर्माण गरेको पछिल्लो चलचित्र “हिरो नं. १” को ट्रेलर सार्वजनिक(भिडियो सहित)
नायक जयक किशन बस्नेतले निर्माण गरेको पछिल्लो चलचित्र “हिरो नं. १” को ट्रेलर सार्वजनिक(भिडियो सहित)
काठमाडौं -: नायक जयक किशन बस्नेतले निर्माण गरेको पछिल्लो चलचित्र “हिरो नं. १” को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । नायक बस्नेतकै सञ्चालनमा रहेको मोबाई टिभी नामक युटुव च्यानल मार्फत ष्स चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक भएको हो ।